Uya kuba ngumlilo wesono ovutha emlonyeni wakho, uyakuba sisiphithiphithi sam ekuseni, ukwanga okufudumeleyo kwe-Eskimo. Uya kuba yimbewu yobomi bam obutsha.
yenza oko ilanga ungaze unxibe, njengakumandla amadala aphesheya kwezilwandle.
Ndingathanda ukuba ngumsi ophulula imilebe yakho, ungqindilili, kodwa njengomntu ongayifuniyo loo nto, emva koko ube livumba elithe chu emzimbeni wakho.
Ngamanye amaxesha ndiyarhalela ukuphulukana nam kwiimbombo zomphefumlo wakho, phakathi kwempumlo kunye nethemba, indawo yokungafani, indawo yethu yokuphupha.
Ndibonise umdlalo owonwabileyo weentaka ezincinci, apho zihlala kunye bonke ubomi bazo, ndibonise iimbombo zesizungu sakho, zomphefumlo wakho owenzakeleyo, mandibone uvuyo lwakho kunye noloyiko lwakho, kuba kuphela ndifuna ukuba secaleni kwakho.
Masidlule kwimiqolo yeenkumbulo zethu, nganye nganye, ngokungathi yayiyi-albhamu yeefoto, kwaye masikhumbule indlela ebesonwabe ngayo kunye, ukuqhubeka nokuba njalo.
Ndikuphupha kancinci ekubileni kwamashiti, ndiyothuka kuba ndiyakulangazelela, ndigcwalise ubusuku bam obungenanto ngobukho bakho.
Kudala ndiphupha ndikwanga ntsasa nganye, ivumba lothando lokungabikho kwakho limuncu iinkumbulo zam ezibuhlungu, zijongane kuphela nobukho bakho obukhanyayo obunika i-aura yethemba.
Ukuba secaleni kwakho kukukhohlisa nje okundivumela ukuba ndiphuphe, ngaphandle kwethemba. Yintoni injongo yobomi? I-Nostalgia iyodwa ayinakuba kukutya kwikamva elincomekayo, akufuneki soyiswe yimimoya yokoyika kunye nentuthuzelo.
Masizivumele sithwalwe yingoma yeentaka, ngumtsalane wewayini emnandi kunye nencasa yesidlo esihle, sikhupha inkanuko, kancinci kancinci, kwaye sitshisa esihogweni somnqweno kunye nokuziphatha okubi de iintliziyo zethu zihlale.
Ndiyathemba ukuba awuzukuphambuka kude kum, ukuba uhlale nam kude kuse. Ngaphandle kwakho andinako ukuhamba kule labyrinth ibizwa ngokuba lihlabathi.
2 Isibongo esifutshane sothando
Uya kuba lilifa lam ngonaphakade. De umzimba wam ube luthuthu, umphefumlo wam uya kuthembeka kuwe.
Ukuba uthando sisono entolongweni, ndiza kuhlawula, kodwa nangasemva kwezitshixo andisayi kuze ndikulibale.
Ndikuthandile izolo, ndiyakuthanda namhlanje, kwaye ukuba ungandishiya, ndiya kuhlala ndikuthanda, intliziyo yam.
Undikhanyisela rhoqo kusasa, undifaka umbala yonke imihla, yiyo loo nto ndinikezela la mazwi kuwe, ndikuthanda ubomi bam.
Umzimba wam uyakuyeka ukukuthanda, kuba ndiya kufa xa intliziyo yam iyeka ukubetha, kodwa umphefumlo wam uya kukuthanda ngonaphakade, kwaye soze ndikulibale.
Akunyanzelekanga ukuba ubhale izivakalisi zeNeruda okanye iivesi zeBécquer, kuya kufuneka ubone kuphela intliziyo yam, esifa ukukubona.
Ndiyathemba ukuba uziva ngokufanayo nam. Ukuba ufunda ivesi nganye, umbongo ngamnye, ungabona indlela endikukhumbula ngayo, indlela endiva ubunzima ngayo ngenxa yothando lwakho.
Siphuzana ngothando, siyangana, silala sisile ... kodwa ngaphezulu kwako konke, siyicocekile sibambene ngezandla, kuba uthando lwethu luzelwe ngumphefumlo.
Ndingathini ukuba ndingacingi ngawe, ukuba ndiyakukhumbula? Ndingathini ukuphupha ngawe, ukuba uyingelosi yam? Ndingathini ukuba ndingakuthandi, ukuba ndiziva ndikuthanda nje?
Andoyiki kwanto, kodwa andikasichazi isizathu sokuba ndingcangcazela ngalo lonke ixesha ndikubona….
Kutheni uhlala ukuba awukho ebomini bam? Uyandigqiba, sithandwa sam. Andizange ndicinge ukuba ndingathanda ngolu hlobo, ndiyabulela uThixo ngokudibana nawe.
Kodwa ayisiyiyo imibongo kuphela ekhonza ukuveza ezona mvakalelo zethu zinzulu. Amaxesha amaninzi, isingqisho asiyomfuneko. Kungenxa yoko le nto ezinye zezona ntetho zintle zothando.
Ndiyoyika ukukuthanda, ngokungathi akukho nto kwi-barbecue kwaye hayi kwixa elizayo, ukuba ndilahlekelwe nguwe….
Uyandikhuthaza, uyandizalisa, ungulo mfazi undigqibezela ngaphakathi.
Iintaka zibuhlungu xa isibhakabhaka sinamafu. Kwenzeka into efanayo kum xa ndingekho ecaleni kwakho.
Ungawulibali loo mini, ungawulibali loo mzuzu, ukusuka ku-kiss wethu wokuqala, entliziyweni yam ndikuthwala ngaphakathi.
Andiyi kuba ngowamntu, nguwe wedwa. De amathambo am ajike abe luthuthu nentliziyo yam iyeke ukubetha
Andoyiki nto, kodwa wena, endimthandayo kakhulu, ndiyangcangcazela ngayo yonke imbonakalo.
Umbala wokutshona kwelanga mhle, kodwa nkqu neLanga alifani nokuqaqamba kwamehlo akho.
Umgama unokukukhumbula sithandwa sam, umoya esifubeni sam ungena ungenanto, kuba ukuba kude nawe entliziyweni yam kubuhlungu.
Ngawe intliziyo yam iya kufa, kuba ekuphela kwento enakho ukuyenza ibethe luthando lwakho oluhle.
Ndiyazi ukuba ndiya kukuthanda ngaphandle kwemibuzo, ndiyazi ukuba uya kundithanda ngaphandle kweempendulo.
Uthando lubonakaliswa ngoonobumba abasixhenxe. Awudingi ukuzibhala, awudingi ukuzikhwaza, kufuneka uzihlebe nje endlebeni yakho…. Ndiyakuthanda.
Mhlawumbi emva ukufa Ndiza kuya kwindawo ethile, kodwa uthando lwam kuwe aluyi kutshabalala, luya kuhlala luhle.
Xa iLanga liphuma okanye uMhlaba uthe tyaba, iya kuba ngumhla wokushiya umphefumlo wam.
Isibongo esifutshane sothando
Amehlo akho andenza ndincume, imilebe yakho indenza ndiphuphe, ukwanga kwakho kundenze ndizive kwaye umphefumlo wakho undenza ndithande. Ungaze undishiye.
"Ndiyakuthanda" ayisiyo movie, incwadi okanye ingoma, yimvakalelo evela entliziyweni yam.
Ngomqondiso omncinci esadibana nawo, ngenkangeleko siyathandana, ngokuwola sithandana kwaye ngokwanga sathandana.
Amehlo akho ayakhazimla, ulusu lwakho luyi-emerald, iidayimani ngamazinyo akho, umlomo wakho uyafa ukuwanga.
Ntsasa nganye ukhanyisa igumbi lam, ndivuka, ndijonga efestileni kwaye ndibona ukubonakaliswa kothando lwethu.
Kuyakubakho iziqalo eziliwaka, ukuphela kwesigidi, kuzo zonke nguwe kunye nam, sihamba iindawo ezintsha. Kuba le yindlela endifuna ngayo ubomi bam, ndibelana namaxesha nawe, nganye yeentsuku zam, uthando oluhle infinito.
Khumbula usuku, khumbula inyanga, khumbula ukwanga esasinikelana okokuqala.
Sithandwa sam, namhlanje ndikunika esi sipili. Kuyo uyakufumana eyesibini intle, akukho nto ingako kwaye akukho nto iphantsi kunokubonisa kwakho.
Uthando lufana nebhedi engenziwanga, njengamaphepha amdaka, lixesha lokuba ungene kwisiphithiphithi. Nangona kunjalo, laa mbhodamo imnandi, uvuyo lufana nokucengceleza imibongo eliwaka ekugcwalisa ngamandla. Ukuba ngenye imini ifikelela kuwe, uThixo akavumelekanga ukuba uyichole.